Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo u guuray kursiga Waxbarashada”WARBIXIN” – idalenews.com
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo u guuray kursiga Waxbarashada”WARBIXIN”
Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sh. Axmed waxaa lagu tiriyaa Hogaamiyaashii Afrika ee ogalaaday guuldarada Doorashada isagoo aaminsan Jiritaanka Dimuquraadiyadda, xili Qaaradda Afrika ay Camirayaan Hogaamiyayaal ama madax maamula Wadamadooda wax ka badan Cimrigooda mararka qaar. kursigii Madaxtinimada una guuray Kursigii Waxbarashada, Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Waxa uu ku biiray todoba hogaamiye oo Afrikaan ah oo Madaxtinimadooda ka dib ka bilaabay waxbarasho jaamacadda Boston ee ku taala Mareekanka. ka dib markii uu ogalaaday Sheekh Shariif guuldarada Doorashada, Xilkana isaga dagay waxa uu u Baqoolay Dalkaasi Maraykanka isaga oo ku akaaday oo kaliya kursiga Waxbarashada,
Waana madaxwaynihii Xukunka kula wareegay Awoodda Hubka dabadeedna u Gogol dhigtay Falaagooyinkii kasoo hor jeeday, waxa uuna u diyaariyay Soomaaliya mar kale muddo 20 sano ah Xukunka dhexe, Sida uu baahiyay TV-ga afka carabiga ku hadla ee Al-carabiya. waa Muuqaal aan horay looga baran Kuraasta Madaxtinimada ee Qaaradda Afrika, lakin Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya maaha madaxwaynaha kaliya ee ku biiraya barnaamijka la yiraahdo (Visiting president) Deegaan siinta Madaxda ee Machadka Cilmi Baarista Keydka Madaxwaynayaasha Qaaradda Afrika oo ka tirsan Jaamacadda Boston. waxaana horay ugu biiray Madaxwaynihii hore ee Zaambiya Kenneth Kaunda kadib markii xilka madaxwaynanimada Dalkaas haayay muddo 30 sano ku dhawaad ah, sidoo kalena waxaa ku biiray barnaamijkaas madaxwaynaha Zazibaar Amaanii Cabiid, iyado intaas sii dheertahay Madaxwaynaha Dalka Butuswaana Fitistaay Mugaaya.
Waxaana lagu wadaa Barnaamijkan in ay usoo bandhigaan Hogaamiyaashii hore qayb ka mid ah Kalsoonida ka jirta Wadamadooda in loogu deeqo Boos Caalami ah oo soo ifbaxaya, ujeedana laga leeyahay waxa ka mid ah in uu hanto Abaalmarinta Sanadlaha ah ee Afrika taasoo uu ku helayo 5 Malyan oo Dollarka Mareekanka ah, abaalmarintaas oo la siiyo Madaxda Afrika ee Xilka si Nabad ah oo Dimuquraadiyad ku salaysan tahay kaga daga.
Qaaradda Afrikana waxa ka jira midda Carabta oo kale taasoo Jiil dhan oo Hogaamiyaal ah ay kasoo horjeestaan in xilka ay isaga Dagaan si nabad ah, iyagoo waqti dheerna ku nagaada xukunka. waxa ayna u arkaan dadka ku Jira Barnaamijka Deegaansiinta Madaxda ee Jaamacadda Boston in uu xal soo jiidasho ah u yahay sidii loogu qancin lahaa Madax badan oo xilka si kaligii taliya ah u haysta una ogalaan lahaayeen Dimuquraadiyadda.
Suxufiyad Siddeed Sano jir ah oo Wareysi la yeelatay Ra’iisul wasaaraha dalka Turkiga!!
Madaxweynaha J.F.Somalia oo Mareykanka kula kulmay madaxweynaha Bankiga Aduunka